Ihe oriri detox ọ na-arụ ọrụ n'ezie? | Bezzia
Pau Heidemeyer | 07/04/2021 23:55 | Nri, Ahụike
Enwere otutu nri n'ime ụwa oriri na-edozi ahụ, nke ọ bụla akọwapụtara iji nweta ebumnuche dị iche: ibu ibu, ịbawanye ụba mmadụ, meziwanye obi obi, ma ọ bụ nri dị obere nke nwere abụba ma ọ bụ sodium.
N'aka nke ozo, enwere nri ndi ozo n'enye obi uto. Ha dị mma maka ime ka ahụ dị ọcha ma nwee ọtụtụ ndị na-eso ụzọ, gụnyere ndị a ma ama.
Tupu ịmalite nri, ọ dị mkpa ịmara ebumnuche anyị chọrọ iji mezuo, na nke a, anyị ga-amakwa ihe ọghọm dị na nri anyị chọrọ ịmalite nwere ike ịnwe.
Enwere ọtụtụ nri detox, emebere ụfọdụ dabere na ihe ọveraụveraụ na-aba n'anya, ahịhịa ma ọ bụ ndị ọzọ na-ebu ọnụ, na ị andụ obere akwụkwọ nri na mkpụrụ osisi, yana ụfọdụ mgbakwunye.
Nri nke na-edozi ahụ, na-enye gị ohere ịgbaso atụmatụ siri ike ịkwụsị ibu ngwa ngwa, na-enyere aka ịsachasị mmiri ọgwụ ndị na-egbu egbu, na ngafe ọ bụla.
Mgbe anyị na-ekwu maka ịtacha ahụ, anyị na-anwa ime ka ahụ anyị wepu nsị na-agbakọta mgbe oke nri nke nri eserese na mmetọ gburugburu ebe obibi anyị nwere ike ịgbari.
1 Detox nri niile ị chọrọ ịma
1.1 Ọmụmụ ihe na nri detox
1.2 Mbido nke nri detox
2 Otu nri detox si arụ ọrụ
3 Lezienụ anya na nri detox
4 Rie nụ nke ọma ma ahụ gị ga-eme nke ọzọ
Detox nri niile ị chọrọ ịma
Anyi aghaghi imata nsogbu di na udi nri detox a nwere ike inwe. A ghaghi icheta na ụdị nri a na - agba ume iri nri sitere n'okike, b tinye otutu mmiri na akwukwo nri, ihe ndị dị mma maka ahụike gị.
Dika otutu nri ndi ozo, nri ndi ozo nwere ike inwe nsogbu ndi ozo nke anyi aghaghi ima banyere tupu itinye ha.
Ọmụmụ ihe na nri detox
Ugbu a enweghi otutu ihe omumu nke gosiputara irighiri ya, ebe obu na enwere ndi nabatara udiri nri a ebe obu na ha na-ekwu na toxins adighi arapu aru ya mgbe nile ma ha choro nkwado iji nyere aka mee ka aru di ocha.
Ndị a na-ahụ otu nsị dị na ya si dị usoro digestive, gastrointestinal, and lymphatic systemtinyekwara akpụkpọ na ntutu ma nwee ike ibute ike ọgwụgwụ, isi ọwụwa na ọgbụgbọ.
N’aka ozo, enwere ndi n’acho na a na ewepu nsi n’adighi anya ma odighi mkpa iso usoro siri ike iji mezuo ya.
Mbido nke nri detox
Ebumnuche bụ isi dị n'azụ nri nri bụ ịhapụ ụfọdụ ụdị nri nwere ike ịnwe toxins maka oge. Echiche bụ ime ka ahụ dị ọcha ma hichaa ihe niile "ọjọọ." Otú ọ dị, eziokwu bụ na e mere ahụ mmadụ site na iji usoro nhichapụ ya.
Otu nri detox si arụ ọrụ
Dị ka anyị kwuru, ọ bụghị naanị otu nri detox, ha dị iche n'etiti ha na ọtụtụ n'ime ha chọrọ oge ụfọdụ nke ibu ọnụ, ya bụ, kwụsị iri nri ụbọchị ole ma ole ma were nwayọọ webata na nke nta nke nta ụfọdụ ụdị nri na nri.
Ọtụtụ nri dị otú ahụ na-akwado ogbugba mmiri n'ubi ma ọ bụ enema iji "mee ka eriri afọ ahụ dị ọcha". Ihe oriri ndị ọzọ na-atụ aro ịnwe mgbakwunye ma ọ bụ ụdị tii pụrụ iche iji nyere aka na usoro ịdị ọcha nke ahụ.
Nri detox nwere ike igbochi ma gwọọ ọrịa iji nye ndị mmadụ ume ma ọ bụ lekwasị anya. Inwe ahu juputara na nri "nsi" ga eme ka ike gwụ anyị, nwayọ nwayọ yana isi ọwụwa.
Ọ dị mkpa ịnweta nri dị obere na abụba na ụbara dị elu, si otú a na-edozi nri ahụike ma na-enye ndị na-eso ya ume.
Agbanyeghị, dị ka anyị tụrụ anya na mbụ, enweghi ihe omuma sayensi na nri ndia na enyere aru aka iwepu nsi ngwa ngwa ma ọ bụ mkpochapụ toxins, ọ bụ ezie na ọ dịghị mgbe ọ na-afụ ụfụ ịgbaso nri na-enye ohere ka ahụ nwee ezumike.
Lezienụ anya na nri detox
Ọtụtụ ndị kwenyere na ọ bụrụ na ha gaa nri na-eri nri, ha ga-atụfu ibu dị ukwuu, agbanyeghị, ọ bụghị eziokwu kpamkpam A ghaghị itinye ụkpụrụ nduzi ụfọdụ ka ị ghara itinye ihe egwu, ebe ọ bụrụ na nri ndị siri ike na-eme, ndị a nwere ike iburu ha nsogbu.
Nri Detox anaghị adabara ndị nwere ọrịa ụfọdụ. N'echiche a, anaghị akwado ya maka ndị na-arịa ọrịa shuga, ọrịa obi na ọnọdụ ahụike ndị ọzọ na-adịghị ala ala. Ọ bụrụ na ị dị ime ma ọ bụ nwee nsogbu iri nri, ị kwesịrị izere ụdị nri ndị a.
Usoro nri pụrụ ịetoụ ahụ. Nke a bụ n'ihi na enweghị nri ma ọ bụ nchịkwa nke enema na-emepụta mmetụta dị iche na ikekwe ọtụtụ mmadụ nwere mmasị na ya. Maka ụfọdụ ndị, mmetụ yiri nke nicotine ma ọ bụ mmanya na-adị na-adịkarị.
Ihe mgbakwunye iji dozie ahụ nwere ike ịnwe mmetụta. Ọtụtụ ihe mgbakwunye e ji mee ha n’oge nri nri ndị a n’ezie bụ ndị ọrụ ume ngụ, na-eme ka ndị nwere “jams” gaa ụlọ mposi karịa. Nke a nwere ike ịnwe nsonaazụ ahụike siri ike, ebe ọ bụ na mgbakwunye mgbakwunye laxative nke bụ ọgwụ nwere ike ibute akpịrị ịkpọ nkụ, adịghị mma ịnweta yana nsogbu dị na sistemu nri.
Ezubere nri nri detox iji nweta ụfọdụ ebumnuche dị mkpirikpi. Ọ nwere ike ịkpata nsogbu ahụike ọzọ, ibu ọnụ ruo ogologo oge nwere ike ime ka ike na-agwụ mmadụ. Nke a na - eme ka ọ dịkwuo mfe ịmalite ibu ibu ma sie ike ibubata ibu n’ọdịnihu.
Rie nụ nke ọma ma ahụ gị ga-eme nke ọzọ
Iri ọtụtụ mkpụrụ osisi na akwụkwọ nri bụ ntọala nke ndụ dị mma. Echefula iwere ha, mkpụrụ osisi, akwụkwọ nri na eriri, yana ị drinkingụkwu mmiri. Mana, ikwesiri ijide n’aka na ị nwetara nri niile ị chọrọ na nri ndị ọzọ.
Mkpụrụ protein ekwesịghịkwa inwe, yana vitamin ma ọ bụ mineral nke a na-enwerịrị site na isi mmalite dị iche iche. Ihe kachasị mkpa na nri siri ike dị iche iche ma ọ bụghị ngafe, n’ihi na n’agbanyeghị otú nri pụrụ isi dị mma, ọ bụrụ na e rie ya gabiga ókè, ọ ga-emebikwu anyị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Bezzia » Ahụike » Nri » Ihe oriri detox ọ na-arụ ọrụ n'ezie?
Uterqüe na-ewetara A la Fresca, ụlọ obibi akwụkwọ SS21 ọhụrụ ya